Sakaraha: nentin’ny havany nanoloana ny tobin’ny zandary ilay razana | NewsMada
Sakaraha: nentin’ny havany nanoloana ny tobin’ny zandary ilay razana
Zandary iray notanana ary natolotra ny fitsarana noho ny fahafatesana olona iray tany Sakaraha. Ny fianakavian’ilay namoy ny ainy rahateo tsy nanaiky fa nitory. Izy roa lahy ireo anefa, samy mamo ary niady… nitarika fahafatesana…
Taorian’ny fahafatesana olona iray notazonin’ny zandary tao Sakaraha, ny alin’ny 22 avrily, ary maty ny 23 avrily tany amin’ny hopitaly Toliara, nentin’ny havany niverina teo anoloan’ny zandary ny razana, ny alarobia 24 avrily teo. Tsy nanaiky ireto olona fa nitabataba teo anoloan’ny tobin’ny zandary tao Sakaraha. Vokatr’izay, nandamina ny tompon’andraikitra ary nilaza fa nandray fepetra avy hatrany. Notanana ilay zandary iray voalaza fa nikasi-tanana ilay olona maty io, ary natolotra ny fitsarana, omaly, izy sy ny namany.
Nisy fanamarihana toy izao, omaly, avy amin’ny zandary momba ity tranga ity: “Ny Fitondram-panjakana fa indrindra ny zandarimariam-pirenena dia tsy manaiky ny herisetra nataon’ny zandary iray, tamin’ny 22 aprily 2019 teo, tamin’ny tovolahy iray izay nitondra azy tamin’ny famoizana ny ainy tao Sakaraha, omaly 24 aprily 2019 . Noraisina avy hatrany ny andraikitra ka notazonina anaty « cellule” any Toliara ilay zandary namono ary atao ny fanadihadihana na ireo zandary niaraka taminy tsy nikasi-tanana aza ka hatolotra ny Fitsarana anio”.
“Ny zandarimariam-pirenena tsy maintsy miaro ireo tobiny noho ny fisian’ireo fitaovana saropady ka raha misy alaim-panahy hanao fihoaram-pefy dia handray andraikitra izy. Ny tranga toy izao, tomponandraikitra feno manoloana ny fiarahamonina sy ny fitsaràna ireo olona nahavita ny heloka fa tsy mialokaloka ao ambadikin’ny maha zandary azy”, hoy ihany ny fanazavana.
Ady anaty hamamoana
Voalaza, tsy tao anaty iraka arakasa ny namojen’ilay zandary ny fety nisian’ny ady fa amin’ny maha olontsotra azy. Mifankahalala ihany ilay zandary sy ilay lehilahy maty io. Nisy nahatsikaritra fa samy mamo izy roa lahy ary nifanao totohondry. Taorian’izay no nentin’ilay zandary tany amin’ny toby fa hoe hotazonina izy io. Raha ny fanazavana, nilaza ho narary andoha izy io, ary nalefa tany amin’ny hopitaly Toliara, ary izao maty izao. Mifamahofaho eo ny raharaha. Ny avy amin’ny tompon’andraikitra efa nandray fepetra amin’ilay zandary.
“Efa maro ny ezaka fanadiovana anatiny ataon’ny zandarimariam-pirenena ka tsy hisafidianana tavan’olona”, hoy izy ireo.